MBS, Dhaxalsugaha Boqortooyada: “Sacuudi Carabiya Diinta Waafiga ah Waa ku soo Celinayaa” – Radio Daljir
MBS, Dhaxalsugaha Boqortooyada: “Sacuudi Carabiya Diinta Waafiga ah Waa ku soo Celinayaa”
Oktoobar 27, 2017 12:20 b 0
Maxamed bin Salmaan (MBS) oo waraysi siiyey wargeyska the Guardian ayaa qiray 30kii sano ee la soo dhaafay Sacuudigu “caadi ma ahayn.”
Asbuucii hore waxaan boggaan Daljir idin kula qaybsanay qoraal dheer oo cinwaankiisu ahaa “Ha Yaabin, Argagixisadu waa Laan Siyaasadda Dibadda ee Dalalka Qaar!” Lagamamaarmaan ma aha in la isku xiro dhibka Soomaaliya ku habsaday 30kii sano ee la soo dhaafay iyo siyaasadda khariban ee Sacuudiga iyo adeegsiga diinta silloon oo sida Maxamed bin Salmaan sheegay aan 30kaas sano aheyn mid caadi ah, si loogu hormariyo danaha siyaasadeed ee dalalka qaar.
Maxamed bin Salmaan, dhaxalsugaha 30 jirka ah ee Boqortooyada Sacuudiga, oo waraysi siiyey jaraa’idka the Guardian, waxa uu ballanqaaday in laga bixi doono marxaladdii dalka Sacuudigu uu ku sugnaa indhawaale, uuna dalka ku soocelinayo “diin Islaan oo waafi ah.” Laakiin waxa uu intaas ku daray, “si loo badalo bulshada Sacuudiga, looga dhigo bulsho furfuran, la jaanqaadda casriga cusub, soojiidata maalgashi, waa lagamamaarmaan in garab laga helo caalamka oo dhan.”
Maxamed bin Salmaan oo waraysiga sii wada waxa uu qirtay in dalku “uusan caadi aheyn” 30kii sano ee la soo dhaafay, waxa uuna eeddaas dusha ka saaray xukunka adag ee bulshada la dul dhigay, wixii boqortooyo dalka soo martayna aysan wax aqoon ah u laheyn sidii xal loogu heli lahaa.
Dhanka maalgashiga iyo casriyeynta dhaqaalaha dalka, waxa uu ballanqaaday maalgashi dhan $500bn ($500 oo bilyan ama nus tirilyan) lagu furayo goobo dhaqaale oo xor ah, la siman Masar iyo Jordan. Maxamed bin Salmaan ayaa yiri, “Sacuudigu waa dal G20 ah. Waa dalalka adduunka ugu dhaqaale roon. Waxaan u dhaxaynaa saddex qaaradood. In aan Sacuudiga badalno, u badalno dal adduunka la jaanqaada, waa arrin u wanaagsan gobolka oo dhan iyo waliba adduunka. Waa arrinka aan hadda qorsheheeda wado, waana mid aan adduunka oo dhan gacan uga baahanahay.”
“Waxa dalka ka dhacay 30kii sano ee la soo dhaafay ma ah wax matala Sacuudi Carabiya. Waxa gobolka ka dhacay 30kii sano ee la soo dhaafay ma aha wax matali kara Bariga Dhexe. Kacaankii Iran ee 1979 kabacdi, dadku waxa ay bilaabeen in ay ku daydaan, dadka Sacuudigana noocaas oo kale bay noqdeen. Aqoon uma aynaan laheyn sida arrinkaas oo kale loo wajaho. Hadana waa kaas dhibkii adduunka oo dhan ku fiday. Laakiin hadda waxaa la gaaray waqtigii salka la goyn lahaa, laga baabi’in lahaa Sacuudiga iyo adduunka oo dhan.”
Soomaaliya oo kow ka aha dalalka la indhabeelay afkaarta diinta silloon ee ka soo maaxda dalka Sacuudiga, arrinkani waxa uu ka tarjumi karaa maslaxadda Soomaaliya oo soo degdegta, iyo dowladnimada Soomaaliya oo ayana 30 sano kabacdi jidka toosan abbaarta. Saas oo ay tahay, weli dowladda Sacuudigu ma aysan shaacin qorshe ay ku badalayso habka waxbarasha jaamacadaha diinta ee Jidda iyo Riyaadh oo badanaa ah jaamacada laga soo xawilo afkaarta silloon ee siyaasadeynsan ee dowladda Sacuudiga iyo xulufadeeda.
Sidoo kale dowladda Sacuudigu ma ay sheegin wax magdhow ah oo ay ka bixin doonto dhaacwaca Soomaaliya ka soo gaaray siyaasaddaas silloon ee Sacuudigu la tiigsaneyey dowladda Soomaaliya 30kii sano ee la soo dhaafay ama dowladaha kale ee adduunka oo ayana saas oo kale ay u dhaawacday siyaasadda silloon ee Sacuudigu.
Arrinkan ma aha mid laga aamusi karo, waana mid laga rabo in dowladda Soomaaliya ay ka hadasho. Waa mid laga rabo in xildhibaanka Soomaaliyeed uu ka hadlo. Uguna daran e waa mid laga rabo in uu aqoonyahanka Soomaaliyeed dabagalo, ka dacwoodo dhaawaca soo gaaray Soomaaliya 30kii sano ee la soo dhaafay, dhaawacaas oo dowladda Sacuudigu ay si dadban maanta u qiratay.
Aan ku noqono waraysiga Maxamed bin Salmaan. Asaga oo muujinaya sida ay uga laabanayaan diinta silloon ee siyaasadda Sacuudiga hormuud u aheyd 30kii sano ee la soo dhaafay, waxa uu yiri, “diintii Islaanka oo dhabta aheyd baan ku laabaneynaa, ahna diin u furan adduunka oo dhan iyo diimaha oo dhan. 70% dadka Sacuudigu waa dhallinyaro da’doodu ka yartahay 30 sano jir. Runtii ma rabno in an aan waqti danbe iyo 30 sano oo kale ku khasaarino ladagaalanka fikradaha xagjirka ah, hadda ayaan baabi’ineynaa oo dhakhso u tirtiraynaa dhammaan xagjirka iyo fikirka xagjirka.”
Mar kale afkaarta MBS waa kuwo saliim ah, waana kuwo soo raagay, laakiin su’aal kale oo u taal dowladda iyo aqoonyahanka Soomaaliyed baa ayana ah: maxaa laga yeelayaa 30 jirka, 60 jirka iyo kan intaas ka da’ weyn ee Soomaaliga ah ee fikirkaas khaldan 30kii sano ee ugu danbeeyey lagu soo xawiley, laguna dagaal galinayey, welina lagu wado? Waa se maxay doorka dowladda Sacuudiga in ay Soomaaliya ka tirtirto fikirkaas qaldan ee Soomaaliya 30kii sano ee la soo dhaafay u diiday “Soomaalinimada?”
Dhanka hormarinta dhaqaalaha iyo goobaha ganacsiga xorta ah ee laga hirgalinayo Sacuudiga ayaa ah xeebta Badda Cas, dherer ahaana lagu qiyaasay 470km, lana rabo in uu dalxiisku qayb weyn ka noqdo, kaas oo noqonaya mid la tartama Dubai, aanna kala sooci doonin ragga iyo dumarka.
Qorshaha dowladda Sacuudiga ayaa ah in dhaqaalaha dalka laga xoreeyo ku xirnaanta saliidda, oo hadda ah isha ugu weyn ee dhaqaale. Saas oo ay tahay, Maxamed bin Salmaan waxa uu qiray in ay tahay hawl adag, una baahan in marka hore dadka fikirkooda la xoreeyo, la baro shaqada, laga waaniyo shaqo-xumida, lana yareeyo shuruucda xad-dhaafka ah ee dalka ee hortaagan ganacsiga xorta ah.
Asaga oo arrinkaas dabajooga, Maxamed bin Salmaan waxa uu yiri, “in dhaqaalaha dalka la badalo oo la garaabo-gadiyo waxa ay lagamamaarmaan u tahay isbaddalka bulsho ee aan maaganahay. Mid kuma aad guulaysan kartid adiga oo aan kan kale qorshe u degin. Waana in degdeg loo sameeyo isbaddalkaas dhaqaale iyo kan bulsho. Waa muhiim in la maareeyo, loona maareeyo si sugan.”
Maxamed bin Salmaan oo sii wata waxa uu yiri, “haddii aan bulshada heshiis lala gelin, oo bulshada iyo dowladdu aysan axdi wada yeelan, isbaddalka dhaqaale ee aan maagganahay guulaysan mayo.”
Heshiiska bulsho ee xafiisyada sare ee Boqortooyada Sacuudiga ka dhawaajisay baa waxaa kamid ah, “in dhallinta loo ogolaado in ay yeeshaan nolol bulsho. In la maaweeliyo oo ay ismaaweeliyaan. Waa in aysan dhallintu fadhiboob wada caajis ah noqon, haddii kale waaba na nacayaan. Haweenku waa in ay shaqada gaarigoodu u kaxaystaan, haddii kale waa baaba’ iyo bulsho xumo. Qof kasta maanta waa ogyahay sida arrinku yahay, waana mid u baahan isbaddal degdeg ah, haddii kale waxba ma harayaan. Qofka kaliya oo taas maanta moog waa dadka tuulooyinka deggan oo aan rabin in aysan waxba isbadelin. laakiin taasina dhib ma leh, oo waa baran doonaan isbaddalka.”
In kasta oo shaki badan laga qabo siyaasadda Maxamed bin Salmaan, shakigaasna uu ku sallaysanyahay laba dagaal oo uu amray, waa dagaalka Yeman oo weli socda, laguna hoobanayo, baabi’iyeyna dalka Yeman, iyo kan dalka Siiriya oo hadda Sacuudigu uu si xun ugu khasaaray, dhan dhaqaale iyo dhan siyaasadeed, hadana Soomaliya haddii ay ka faa’iideysan karto fikirka Maxamed bin Salmaan waa mid u muuqda in uu Soomaaliya ka saarayo mugdigii 30ka sano, una gogol-xaaraya joojinta colaadaha loo xawilo Soomaliya.
Saas oo ay tahay, Sacuudiga iyo xulufadiisu diyaar ma u yahiin in ay magdhow ka bixiyaan khasaaraha Soomaaliya lala beegtay 30kii sano ee la soo dhaafay, welina sii kordhaya? Yaa se laga rabaa in uu magdhowgaas Soomaali u raadsho?
Waraysiga wargeyska the Guardian hoos RIIX.
Qormooyinka Daljir 52 Siyaasadda & Dhaqaalaha 466 Wararka 18342